10 ကမ္ဘာ့အရောင်စုံဆုံးနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ကမ္ဘာ့အရောင်စုံဆုံးနေရာများ
ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ပိုလန်ခရီးသွားလာပိုလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနဲ့ ဝေးရာကို ပုန်းအောင်းပါ။, ဤ 10 ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရောင်အသွေးအရှိဆုံးနေရာများ, တကယ်ကို စိတ်အားတက်ကြွစရာတွေပါ။. ပန်းချီဆရာများနှင့် စာရေးဆရာများသည် ဤရောင်စုံနေရာများတွင် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။. ဒါကြောင့်, ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။, ဤနေရာများထဲမှ တစ်ခုခုကို လည်ပတ်ခြင်းသည်လည်း သင့်အတွက် ဘဝပြောင်းလဲစေမည့် အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်လာမှာ သေချာပါသည်။.
1. ကမ္ဘာ့အရောင်စုံဆုံးနေရာများ: ငါးပြည်, အီတလီ
မီးခိုးရောင်ဆောင်းရာသီနေ့သို့မဟုတ်အပြာရောင်မိုးကောင်းကင်နွေရာသီနေ့, Cinque Terre သည်မည်သည့်ရာသီဥတုတွင်မဆိုအရောင်အသွေးစုံလင်သည်. လှပသောအိမ်များသည် အပြာရောင်ပင်လယ်ပြင်ကိုမြင်ရပြီး အရောင်အသွေးအစုံလင်ဆုံးပုံများကို ဖန်တီးထားသည်။. ထို့အပြင်, Cinque Terre မှာ သင်သွားလည်တဲ့ ရွာတိုင်းက တခြားရွာတွေထက် အရောင်ပိုလှပါတယ်။, အဝါရောင်ဖြင့်ခြယ်ထားသောအိမ်များ, ပန်းရောင်, အနီေရာင်, နှင့်လိမ္မော်ရောင်အသံ.
ဒါကြောင့်, ပင်လယ်ပြာနှင့်စိမ်းလန်းသောတောင်တန်းများနှင့်အတူ, အီတလီရှိ Cinque Terre ဒေသသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရောင်စုံဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤရောင်စုံခရီးသည် La Spezia မြို့၌ အမှန်တကယ်စတင်ခဲ့သည်။, ဆိပ်ကမ်းမြို့ကြီးတစ်ခုနှင့် Cinque Terre ရထား၏ ထွက်ခွာမည့်နေရာ. Cinque Terre ကိုရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်း ရွာတိုင်းကိုရထားကဖြတ်သွားတာအကောင်းဆုံးဘဲ, ဒါကြောင့်နေ့မှာသင်အလိုရှိတဲ့ဘယ်နေရာကိုမဆိုပြန်သွားနိုင်တယ်.
2. ဇမ္ဗူခင်း, နယ်သာလန်
ပန်းရောင်, အဖြူ, လိမ္မော်သီး, ခရမ်းရောင်, ဟော်လန်၏ဇမ္ဗူခင်း သက်တံ၏အရောင်အားလုံး၌မှော်ဆန်သည်. အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဇမ္ဗူခင်းများကိုကြည့်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာသည် Keukenhof တွင်ရှိပြီးအလှကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်သည်. Keukenhof မှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလယ်ကွင်းများသည်ဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရသည်. သို့သျောလညျး, ရှားပါးလှသော အလှတရားသည် ပို၍လှပသော ကျူးလစ်များဆီသို့ နောက်ထပ်ဆယ့်ငါးမိနစ်ကြာအောင် ဆက်သွားနေပါသည်။.
ဧပြီလမှမေလလယ်အထိဤရောင်စုံမြင်ကွင်းကိုသင်ခံစားနိုင်သည်, tulips ကာလအတွင်း’ အပွင့်. ကြီးမားသောဇမ္ဗူခင်းများသည်အမ်စတာဒမ်မှခရီးတိုတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါမှ အံ့ဩစရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ တစ်နေ့တာခရီးစဉ် နယ်သာလန်သို့’ ကျေးလက်. ဖြည့်စွက်ကာ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပန်းများကိုလေးစားရန်ဒေသခံများကဲ့သို့စက်ဘီးငှားနိုင်သည်.
3. ကမ္ဘာ့အရောင်စုံဆုံးနေရာများ: Menton Cote D'Azur, ပြင်သစ်
လှပသော French Riviera ကမ်းရိုးတန်းတွင်, Monte Carlo ရှိ paparazzi နှင့်ဝေးသည်, Menton သည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ကမ်းရိုးတန်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။. Belle Epoque pastel အိမ်များ, ဤစိတ်ကူးယဉ်ရွာလေး၏ အလှကို ဖြည့်သွင်းပြီး ပထမဆုံးလာရောက်လည်ပတ်သူတိုင်းကို ကြည်နူးစေပါသည်။.
၎င်းသည်အီတလီနယ်စပ်နှင့်အလွန်နီးကပ်သောကြောင့်ပြင်သစ် (သို့) အီတလီရှိမည်သည့်အမှတ်မှမဆိုသင်သွားနိုင်သည်. Cote D'Azur သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အလွန်လှပသောဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်အပန်းဖြေရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, ရောင်စုံမြို့ရဲ့နောက်ခံမှာဓာတ်ပုံကောင်းတွေအပြင်, အပျော်စီးသင်္ဘောစီးခြင်းသည် Menton တွင် အံ့သြဖွယ်အားလပ်ရက်ကို ဖြတ်သန်းရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။.
4. Pelourinho, ဆာဗေးဒေါ
မြို့တစ်မြို့အတွင်းမြို့တစ်မြို့ဟုခေါင်းစဉ်တပ်သည်, အဆိုပါ မြို့လယ်ခေါင် Salvador ရှိ Pelourinho သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အရောင်အသွေးအရှိဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ကျွန်လေလံပွဲအတွက် တစ်ချိန်က တည်နေရာသည် ယနေ့ Salvador တွင် အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီး အတက်ကြွဆုံးနေရာဖြစ်သည်။. ထိုဧရိယာသည် ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အအုံများ၏ ရောင်စုံမျက်နှာစာများ ရှိပြီး အနုပညာရှင်များ နေထိုင်ရာ နေရာလည်း ဖြစ်သည်။, ဂီတသမား, နှင့်ကြီးကျယ်သော nightlife.
ထို့အပြင်, ရောင်စုံ Pelourinho သည်ဘရာဇီးနှင့်အာဖရိကအမွေအနှစ်များအကြောင်းသင်ယူနိုင်သောယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံယဉ်ကျေးမှုစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါ ကြီးမြတ်စားသောက်ဆိုင် Pelo တွင် ဟင်းလျာနှစ်မျိုးလုံးမှ ကောင်းမွန်သောဟင်းလျာများကို ပေးဆောင်သည်။. ဒါကြောင့်, လက်လုပ်စတိုးဆိုင်များစွာတွင် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူပြီးနောက်, မြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်။ အံ့သြစရာအစားအသောက်များ အာဖရိကနှင့် ဘရာဇီးအစားအစာများမှ.
5. ကမ္ဘာ့အရောင်စုံဆုံးနေရာများ: Wroclaw, ပိုလန်
အနောက်ပိုလန်တွင် အကြီးဆုံးမြို့, Wroclaw သည်ပိုလန်နိုင်ငံ၏ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. Wroclaw သည် ချစ်စရာကောင်းသည်။ အရိုက်ခံရသော-မဂ်သို့ ဦးတည်ရာ ဥရောပမှာ, အရောင်အသွေးစုံလင်သော ဗိသုကာလက်ရာများက ၎င်းကို အနက်မှတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ လှပသောမြို့ကြီးများ ဥရောပမှာ. အလယ်ခေတ်ဈေးကွက်ရင်ပြင်၌အရောင်စုံဆုံးနေရာ, အနီးနားရှိ စားသောက်ဆိုင်များထဲမှ သက်ဝင်သောလေထုကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာ.
ဒါကြောင့်, ရောင်စုံလမ်းများနှင့်မြို့ဟောင်း၌လမ်းလျှောက်ရန်သင်၏ကင်မရာနှင့်လမ်းလျှောက်ဖိနပ်ကောင်းကောင်းကိုသေချာဖမ်းပါ. ဆောင်းတွင်းမှနွေရာသီအထိဖြစ်သည်, ရောင်စုံ Wroclaw သည်သင့်အားနွေးထွေးစွာကြိုဆိုသည်, အာလူးများနှင့်ပြည့်နေသော Polish pierogi, ဒိန်ခဲ, သို့မဟုတ် သစ်သီး.
6. Burano ကျွန်း, အီတလီ
Venice အနီးရှိနာမည်ကျော်ကျွန်းသုံးကျွန်းအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်, Burano သည်ချစ်စဖွယ်အီတလီကျွန်းသုံးခုကြားတွင်အရောင်အသွေးစုံလင်သည်. တစ်ဦးက လှေခရီးစဉ် ပြည်မကြီးနှင့်ဝေးသည်။, Burano ၏ တောက်ပသော ဆေးခြယ်ထားသော အိမ်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ရာသီပိတ် အားလပ်ရက်ခရီး. သင်ကျွန်းအတွင်း ၀ န်းရံနိုင်သည်2နာရီ, သင်တစ်နေ့တာလုံးကုန်ဆုံးလိမ့်မည်။, ဓာတ်ပုံရိုက်ရုံပါပဲ။.
တူးမြောင်းများစွာဖြင့် တံတားများတစ်လျှောက် ချစ်စရာကောင်းသော တံငါသည်အိမ်များသည် Burano ၏အလှကို တိုးစေသည်။. ၎င်းသည်ထိပ်ဆုံးတစ်ခု၏ပို့စကတ်ကဲ့သို့ပုံကိုထပ်ပေါင်းသည်5ဥရောပ၌ရောင်စုံနေရာများ. Burano သို့အလည်အပတ်သည် Venice မှအလွန်ကောင်းသောနေ့ခရီးဖြစ်သည်, ဇာစျေးဝယ်ခြင်းနှင့် Venetian lagoon ၏ရှုခင်းများနှင့် Aperol နေ့လည်ခင်းသောက်စရာများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်.
7. ကမ္ဘာ့အရောင်စုံဆုံးနေရာများ: Nyhavn, ကိုပင်ဟေဂင်
လှပတင့်တယ်သောဆိပ်ကမ်းသည် တစ်ချိန်က အကြီးကျယ်ဆုံး ကလေးစာအုပ်စာရေးဆရာများထဲမှ တစ်ဦးကို Princess and the Pea ရေးရန် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။. ဟုတ်ကဲ့, မဟုတ်ဘူး. 20 Townhouse သည် တစ်ချိန်က Danish Hans Christian Andersen ၏အိမ်ဖြစ်သည်။. ရောင်စုံ Nyhavn သည် အသက်ဝင်သော ဗဟိုဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, သင်္ဘောသားတွေကို ဘယ်မှာကြားနိုင်မလဲ။’ မည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်မဆိုခေါ်ဆိုပါ။.
ယနေ့တွင်, ပြန်လည်မွမ်းမံထားသော Nyhavn သည် တစ်နေကုန်တွင် ဒေသခံများ လာရောက်အပန်းဖြေသည့်နေရာဖြစ်သည်။. ဂျက်ဇ်ဂီတဖြင့် ညစာ, လှေတွေနဲ့ ရောင်စုံမြို့ပြတွေရဲ့ နေဝင်ချိန်ကို ကြည့်တယ်။, ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။.
8. ဂွါတာပီ, ကိုလံဘီယာ
တံခါးတွေနဲ့, နံရံများ, ခေါင်မိုးများသည် အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။, Guatape မြို့ သည် Colombia ၏ အရောင်အသွေးအရှိဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။. ဤရောင်စုံမြို့သည် ကိုလံဘီယာရှိ အပန်းဖြေမြို့ဖြစ်သည်။, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင်ကွင်းများနှင့် တောင်တန်းများနှင့်အတူ. ထိုကွောငျ့, တစ်ဘို့ အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်း တစ်မြို့လုံးနှင့်၎င်း၏အရောင်, La Piedra del Penon ကိုသင်တက်နိုင်သည်။, ထိပ်မှာ 740 ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရောင်အသွေးအစုံလင်ဆုံးနေရာ၏ အံ့ဖွယ်မြင်ကွင်းကို သင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။.
သို့သျောလညျး, မြို့၏ အတောက်ပဆုံး အစိတ်အပိုင်းများမှာ Zocalos တွင်ဖြစ်သည်။, အိမ်များ၏အောက်ပိုင်း. zocalos များသည် လက်ဖြင့်ခြယ်သထားသော အလှဆင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။, တိရိစ္ဆာန် သို့မဟုတ် ပန်းပန်းချီအချို့, အခြားအရာများသည် ရောင်စုံအလှဆင်မှုများဖြစ်သည်။. ကောက်ချက်ချရန်, အနည်းဆုံး ရက်အနည်းငယ် စီစဉ်ပါ။’ Guatape သို့ခရီး ထို့ကြောင့် သင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အတောက်ပဆုံးနှင့် အရောင်အသွေးအရှိဆုံးလမ်းများကို စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။.
9. ကမ္ဘာ့အရောင်စုံဆုံးနေရာများ: Colmar, ပြင်သစ်
ရောင်စုံပျဉ်ထောင်အိမ်များ, ပန်းအလှဆင်ထားသော တူးမြောင်းများ, Colmar သည် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ အသက်ဝင်လာသည့် ပြင်သစ်မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။. လှပသောတူးမြောင်းများသည် သင့်အား ချစ်စရာကောင်းသော လမ်းကြားများကို ပွင့်လင်းသောရင်ပြင်များဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။. ဒီမှာ, တံငါသည်များသည် တစ်နေ့တာ၏ စွန့်စားခန်းများနှင့် ပင်လယ်ပုံပြင်များကို ထိုင်ပြောလေ့ရှိကြသည်။.
သင်သည် ဆွစ်ဇာလန်ရှိ Basel မှ Colmar သို့ သို့မဟုတ် ပြင်သစ်ရှိ အဓိကမြို့ကြီးတစ်ခုခုသို့ သင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။, ရထားနဲ့. ဒါကြောင့်, သင်၏ဥရောပအားလပ်ရက်ခရီးစဉ်တွင် Colmar သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါ။. နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ သင်၏အားလပ်ရက်တစ်ခုလုံးကို Colmar တွင်သာ ကုန်ဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, Colmar တွင် ပြင်သစ်ရှိ အရောင်အသွေးအရှိဆုံးနေရာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရုံမှလွဲ၍ လုပ်စရာများစွာရှိသည်။. ဥပမာ, တူးမြောင်းကို ဖြတ်သန်းခြင်း။, အကျုံးဝင်သော စျေးကွက်တွင် ဈေးဝယ်ခြင်း။, Alsace ဝိုင်ကို မြည်းစမ်းပါ။.
ရထားဖြင့် ပါရီမှ Colmar သို့
ရထားဖြင့် ဇူးရစ်မှ Colmar သို့
ရထားဖြင့် စတုဂတ်မှ Colmar သို့
လူဇင်ဘတ်ကရထားနှင့်အတူ Colmar သို့
10. Chefchaouen, မော်ရိုကို
စိမ်းလန်းတဲ့ ချိုင့်ဝှမ်းမှာ ပုန်းကွယ်နေခဲ့တယ်။, ရုံ2Tangier မှနာရီ, Chefchaouen သည် အပြာဆုံးနှင့် အဖိုးတန်ဆုံး ကျောက်မျက်ရတနာ ဖြစ်သည်။. အပြာနှင့်အဖြူရောင်ခြယ်, ရောင်စုံအလှဆင်မှုများနှင့်အတူ, Chefchaouen သည် မော်ရိုကိုတွင် အတောက်ပဆုံးနေရာဖြစ်သည်။. ဂရိကျွန်း Santorini နှင့်ဆင်တူသည်။, ခမ်းနားသောလမ်းများနှင့် ဗိသုကာလက်ရာများသည် အလေးအနက်ထား၍ ခရီးသွားသူများကို ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။.
ဒဏ္ဍာရီများအရ ထူးခြားသောအရောင်ရွေးချယ်မှုသည် ဂျူးလူမျိုးများ ဤမြို့ငယ်လေးတွင်နေထိုင်စဉ် 15 ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။. ထိုကွောငျ့, အပြာရောင်သည် ကောင်းကင်နှင့် ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်သွယ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။. ဂျူးလူမျိုးများသည် ဤမြို့ငယ်လေးတွင် နေထိုင်သူများ မဟုတ်ကြပါ။, မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ထိုနေရာသည် နှစ်ကာလပတ်လုံး ၎င်း၏အလှကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။. ယနေ့တွင်, ဤမြို့ငယ်လေးသည် ထောင်နှင့်ချီသော ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်သည်။, ထို့ကြောင့် အပြာရောင်ထောင့်တိုင်းတွင် စိတ်လှုပ်ရှားနေသော လူအုပ်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရန် ပြင်ဆင်ထားပါ။.
ငါတို့မှာ တစ်ဦးကရထား Save မင်းခရီးသွားဖို့စီစဉ်တာကိုကူညီရတာဝမ်းသာလိမ့်မယ် 10 ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရောင်အသွေးအရှိဆုံးနေရာများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရောင်အသွေးအရှိဆုံးနေရာ ၁၀ ခု” ကို သင့်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းလိုပါသလား။? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fmost-colorful-places-world%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ရောင်စုံ	ရောင်စုံမြို့များ	ရောင်စုံနေရာများ	ရောင်စုံမြို့များ	အရောင်အသွေးစုံလင်သော နိုင်ငံများ	ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အရောင်အသွေးအများဆုံးနေရာများ